Posts 25 · Viewed 5870 · Likes 22 · Go to Last Post
· Snapshot 365
डेभ ब्रो, नसुर्ताउनुस ! सामन्य फ्लू मात्र हो ! बरु मिल्छ भने आफ्नो आसे पासेलाइ नि सारी दिनुस इफ दे आर विलिङ्ग टू ! इमिउन डेभलप् हुन्छ नि ! 👍
· Snapshot 898
उज्ल ब्रो ! हिजो मात्र नेपालमा मम्मीसंग कुरा गर्दै थिए ! मेरी कजन सिस्टरलाइ नि कोभिड लाग्यो रे भन्दै हुनु हुन्थ्यो ! अनि सिस्टरको अनुसार दुइ तिन दिन ज्वोरो आयो रे ! त्यो पनि अहिले उत्र्यो रे अनि सामान्य खोकी मात्र लागेको छ रे ! अनि बहिनिले भन्दै थियिन कि यो कोरोना बाहिर हल्ला फैलाएको जस्तो डर लाग्दो केहि छैन रे जस्ट अ कमन कोल्ड फ्लू जस्तो मात्र असर गर्यो रे ! तेसैले सुर्ता मान्न पर्ने केहि छैन भनिन ! 🙏
अनि अस्ति मात्र इउरोपिएँन डाक्टरहरुको कन्सोर्टीएमले नि तेही भने कि कोभिड सामान्य फ्लु मात्र हो !
मैले त् डे वान देखि भनेकै हो कि यो कोभिड "प्लानडेमिक" हो भनेर ! अल प्लांड टू फक द इकनामी एण्ड माइ बाबाज रिएलेक्स्न !
आर्को कुरा के सुर्ता लागेको छ मलाइ भने, मेन स्ट्रिम मिडियाले बाइदेनले जित्छ भनेर फेक निउज फैलाएको छ ! अनि भेडाहरुको दिमागमा नि यो कुराले जडो गाडी सकेको छ ! मेरो बिचारमा यिनीहरुले फ्रड गरेर बाबा हार्न भो भनेर डिक्लियेर गर्न बेर छैन ! तेसो गरेमा हरेक नेपाली जसले यो प्यारो अमेरिकालाइ आफ्नो कर्म थलो बनाको छ, हामी सब सडकमा उत्रेर आन्दोलन गर्न पर्छ है ! हामिले आफ्नो नुनको सोझो गर्ने येही एउटा अवसर हो !
Last edited: 27-Oct-20 11:06 AM
डाक्टरहरुले नै साधारण फ्लु हो भने सके पछि याँहा मलाइ किन कच कच गरि राख्न भाको भने ! म डाक्टर हु र बिना सित्ति कोरोना लाइ फ्लु हो भन्ने ! वर्ल्ड डाक्टर अलाएन्सका डाक्टरहरुको भनाइ हो त्यो ! मलाइ चैँ पहिला ल्याबमा क्रिएट गरेको भाइरस अलिक पोटेंट होला भनेको तर लाइक एभ्री थिङ्ग चाइनिज, यो भाइरस नि खासाको चाइनिज सामान झैँ बत्तुर नै पर्यो ! तर मेन स्ट्रिम मिडियाले भेडाहरुको कान जो भर दिएको छ, तेसैले उन्हाहरुलाइ अरु केहि होइन फोबियाले मात्र सताको हो जस्तो लाग्छ मलाइ ! केहि डर मान्न पर्दैन ब्रोहरु ! खोइ मलाइ त् पटक्कै लाग्दैन यो भाइरस ! जो जो डराउँछ उनैलाइ मात्र लाग्ने हो कि के हो ?
डेभ ब्रोको गेडा कोरोना लागेर कुइयो भने मात्र पत्याउञ्छु कि यो कोरोनामा केहि दम छ ! होपफुल्ली डेभ ब्रो अलरेडी रिकभर्ड ! 🙏
Last edited: 28-Oct-20 10:26 AM
· Snapshot 1673
होइन सिलिटियो कि क्या हो हाम्रा डेभ ब्रो ! रिकभर भएर देखाई दिनुस त् ब्रो अनि याँहा मलाइ किच किच गर्ने सबै महानुभावको बोल्ती बन्द गरिदिनुस त् ! भंदिनुस त् यो कोभिडमा केहि दम छैन भनेर ! 🤓
· Snapshot 2242
डेभ ब्रो, सो गुड टू हियेर ड्याट इउ रिकभर्ड ! मैले भनेको कुरा सहि हो ! प्रि-एग्जिस्तिंग हेल्थ इस्सिउ वालाहरुलाई यो भाइरस फेटल हुन् सक्छ तर हामि जस्तो नर्मललाइ बेसी असर पार्दैन ! तर भाते डेमोक्र्याटस्हरुले बिनि सित्ति इकनमी लक डाउन गरेको छ ! साला तिनीहरुले गर्दा मेरो स्टक झन्डै सात हजारले डाउन छ ! सार्है रिस उठेको छ मलाइ मेरो स्टक डाउन गरिदेकोमा !
"I am Nutting this november"
ब्रो कसलाई नट गर्ने प्लान ? मैले त् नट गर्नै पाको छैन साला डेमोक्र्याटस्हरुको लक डाउनले गर्दा ! मेरो बाबाले जित्ला र लक डाउन ओपन भए पछि नाइट क्लब जामला भनि कुरिराको ! ट्रंप बाबालाइ भोट हालिदिनुस त् प्लिज !
· Snapshot 2342
"bro you lost my respect :)"
अरुले मेरो बारे जे सुकै सोचोस्, भनोस मलाइ केहि मतलब छैन तर मेरो प्यारो लालमोन ब्रोको रेस्पेक्ट हराउनु भनेको चैँ मेरो लागि सार्है दुखको बिसय हो ! झन् तेस्माथी स्माइलि फेस नि थप्दीन भाकोले त् मेरो गेडामा हथौडा नै प्रहार भाको जस्तो फिल भाको छ ! यो कुराले मेरो मन सार्है खिन्न भाको छ लाल्मोंन ब्रो ! 😭
हा हा डेभ ब्रो ! केटा मान्छे भएर केटिले कहिले दया गर्ला र माया गासुंला भनेर बस्न हुँदैन क्या ! एउटा ट्रिक सिकाउँछु ब्रोलाइ ! आज साँझ तिर कट्टुमा बस्नुस है अनि आफ्नो धुक्कुर खडा पारि एसो आफ्नी दुलहीको अगाडी पर्नुस ! अनि केहि खोजेको जस्तो गरि उँहाले देख्ने गरि धुक्कुर हल्लाउदै जानुस ल ! मेरो बिचारमा उन्हा हर्नि भएर तपाइँलाइ करणी 🙈
Visitor from GB is reading New Opt Rule. Is it true
Visitor is reading net earning in new york
Visitor is reading To StartaIT consulting company
Visitor is reading xerox bollywood songs
Visitor from GB is reading सेन्ट जेविएर, रातो बङला
inventive » Nas
· Posts 15 · Viewed 902 · Likes 9
Logan ko bhatij » Nas
· Posts7· Viewed 730 · Likes 1
· Posts2· Viewed 129 · Likes 1
· Posts 1729 · Viewed 245531 · Likes 865
IT consultancies in the US..
SRV44 » money2go
· Posts3· Viewed 273 · Likes 1
logankobaje » AnandNepal
· Posts2· Viewed 276 · Likes 1
· Posts 1545 · Viewed 81144 · Likes 1652
· Posts 11 · Viewed 985 · Likes 13